FAO oo ka digtay arrin la xariirta Ayaxa ku habsaday Soomaalya | KEYDMEDIA ONLINE
FAO oo ka digtay arrin la xariirta Ayaxa ku habsaday Soomaalya
Wasaaradda Beeraha ee Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ku saabsan duullaanka uu Ayaxu ku soo qaaday Soomaaliya, gaar ahaan Goballada Koofureed, waxaana la muujinayaa rajo xumo aad u weyn.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay'adda cunada iyo beeraha ee Qaramada Midoobay ‘FAO’ ayaa ka digtay in dhamaan diyaaradaheeda ka hor taga Ayaxa ee ku sugan Kenya iyo Soomaaliya la joojin karo sababo la xiriira dhaqaalo yari dhacday, taas oo gaareysa 38 milyan oo doolar.
Dominique Burgeon, oo ah Agaasimaha Xaaladaha Degdegga ah ee FAO, ayaa u sheegay wariyeyaasha in Ayaxa baaxadda weyn ee sannadka 2020-ka gayiga ku baahay aan la arkin muddo dheer, taas khatar ku ah sugnaanta cuntada ee gobol ay dad badani mar hore ku gaajoonayeen.
FOA ayaa rumeysan in duulaanka Ayaxa ku hayo Geeska Afrika ay ugu wacan tahay isbedelka cimilada iyo duufaantii Gati ee ku dhufatay Badweynta Hindiya.
Goobaha uu ku habsaday Ayaxa ayaa u badan dhul oomane ah oo dadka badankood ay yihiin xoolo-dhaqato reer guuraa ah oo noloshoodu ku tiirsan tahay xoolaha, kuwaaas oo nolashu ku adkaan doonto haddi uu Ayaxu saxaro ka dhigo dhulka.
Soomaaliya waxay hadda wajaheysaa baahiyo bina-aadamnimo oo aan caadi ahayn, kadib markii uu dillaacay COVID-19, dalkana ay ka dhaceen daadad waaweyn isla markaana uu ku habsaday Ayaxii ugu tirade badnaa muddo dheer kadib.